Amasiko aseGrisi | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Greece
La Impucuko yamaGrikhi ingenye yezindala kakhulu okukhulunywa ngakho kukho. Lesi siko sigxile kakhulu eMedithera, ngakho-ke amasiko aso ahlobene kakhulu nomlando waso njengempucuko enkulu nobudlelwano bayo nolwandle. Amasiko aseGrisi agcinwe kakhulu eminyakeni edlule, ikakhulukazi eziqhingini zawo, izindawo lapho singabona khona amasiko agxilile.
I-Las amasiko aseGrisi zingathusa ngezikhathi ezithile kwabanye abantu. Kodwa-ke, yidolobha elinokuhlangana okuningi nabanye abantu baseYurophu nabaseMedithera, ababelana nabo ngempilo namasiko. Sizobona amanye amasiko alo abaluleke kakhulu.
1 Ukwephula izitsha
3 Imishado yamaGrikhi
5 IGreece yasendulo
6 Amaholide amaGrikhi
Lokhu kungenye yamasiko adonsela ukunaka kwabo bonke abaya eGrisi. Ngaphandle kokungabaza kuyisiko esikwazile ukulibona kwamanye amafilimu futhi yingakho vele kuyinto eyaziwa emhlabeni wonke. Izivakashi zikuthola a umkhuba oyingqayizivele futhi ohlekisayo wokuphula izitsha. Kuvamile emikhosini emikhulu lapho abangane nomndeni behlangana khona ukuze baphule izitsha. Lokhu kusebenza ukuveza injabulo namuhla, kepha imvelaphi ibonakala ifiphala. Kukholakala ukuthi kwakwenziwa ukuxosha imimoya emibi lapho isondela, ibenze bakholelwe ukuthi kwenzeka isigameko esinodlame. Uma kubonakala kungajwayelekile kithi ukuthi umuntu agcine ephethe izitsha zakhe, kufanele sazi ukuthi ezindlini bavamise ukuba nezitsha ezingabizi kakhulu nokulungiselela okulula lokho abakusebenzisela le micimbi. Ngakho-ke uma unenhlanhla ngokwanele yokuya ephathini yamaGrikhi, ungaphuthelwa yithuba lokuphula izitsha ezithile. Ngisho nasezitolo zokudlela banamapuleti abazowaphula ngesikhathi semikhosi.
I-Las Imindeni yamaGrikhi ingeyesiko futhi basondelene kakhulu. Ngalo mqondo afana namaNtaliyane, ngoba nawo abheka ukubaluleka okukhulu emibuthanweni yomndeni ngesikhathi sokudla. Uma sihambela izivakashi ezincane njengezivakashi, nakanjani kuzoba lula ngathi ukubona impilo yesiko neyomndeni abanayo. Kodwa-ke, ngeke sikwazi ukuqonda ukubaluleka okukhulu kwalokhu kudla okusondelene nomndeni.
I-Las Imishado yamaGrikhi nayo ingokwesiko kakhulu. Akufani nakweminye imikhosi, emishadweni yamaGrikhi umkhwenyana kufanele alinde umakoti emnyango wesonto, ngoba bazongena bebambene ngezandla futhi bephethe amakhandlela amhlophe. Bobabili bazobekwa umqhele emakhanda abo ngesikhathi somkhosi. Izindandatho kufanele zishintshwe kathathu ukuhlonipha uZiqu-zintathu Ongcwele. Ngesikhathi somkhosi singaphinde sibone ukuphulwa kwezitsha ezijwayelekile zemikhosi yamaGrikhi, ngezikhathi zenjabulo enkulu. Ngakolunye uhlangothi, kujwayelekile ukuthi kule mikhosi kukhuthazwe abantu ukuthi benze umdanso wesintu we-hasapiko, owenziwa ngokuncika emahlombe omunye nomunye nokuhambisa imilenze yabo ngazwi linye emdansweni owaziwayo. Uma ungaya kunoma imiphi yale micimbi ngomdanso, ungahlala uzama ukuyenza.
El URebético uyindaba elandelwayo owazalelwa e-Asia Minor futhi osevele eyingxenye yesiko lamaGrikhi. Idlalwa ngethuluzi le-bouzouki eliyingxenye yomndeni wama-lute, osetshenziswa kakhulu kuma-Middle Ages ngama-troubadours. Kule ngoma ungakwazi nokuziqambela futhi inomoya ohlekisayo. Kwakuyingoma ethandwa kakhulu futhi ngenxa yalesi sizathu isindile ekuhambeni kwesikhathi.
Kwakunamasiko amaningi eGrisi lasendulo esiwaziyo ngenxa yalo lonke ifa elashiywa yile mpucuko ethuthukile. Omunye wakhe amasiko omngcwabo Kwakuhlanganisa ukubeka izinhlamvu zemali ezimbili emehlweni alo muntu ofile ukuze akhokhele umgibeli wesikebhe owayemyisa kolunye ugu. Izembatho nazo ziyabonakala kakhulu, nezingubo ezinde ezibizwa ngokuthi i-chiton lapho kweqa khona indwangu ebanzi ebizwa ngokuthi i-himatión.
UKhisimusi nawo ugujwa eGrisi. Namuhla isiko lokubeka isihlahla sikaKhisimusi selidumile njengakwamanye amazwe amaningi emhlabeni. Kodwa-ke, lapha kungokwesiko kakhulu ukuhlobisa izikebhe ngokuhlonipha uSanta Nicholas, amaphethini amatilosi. Akufanele ikhohlakale ukuthi iGrisi ixhunyaniswe kakhulu nolwandle futhi ingxenye enkulu yabantu bayo ibiphila ngokudoba, ikakhulukazi eziqhingini ezincane. IKalikántzaroi zingama-elves amancane okubonakala sengathi afika ngesikhathi sikaKhisimusi futhi angena ezindlini ngoshimula ukwethusa labo abahlangana nabo. Bahamba ngomhlaka XNUMX Januwari, ekupheleni kukaKhisimusi. Ngosuku olwandulela unyaka omusha, sinekhekhe leSan Basilio, ngokwesiko elifana ne-roscón de Reyes yethu, ngoba noma ngubani othola uhlamvu lwemali ngaphakathi uzoba nenhlanhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Greece » Amasiko amaGrikhi